प्रहरीले होटलमा छापा मार्दा चर्चित नायिका समेत पक्राउ, हेर्नुहोस् प्रहरीले क-कसलाई समात्यो? – Paluwa Khabar
माघ १०, २०७७ शनिबार 67
हालै, महाराष्ट्रको मुम्बई प्रहरीले यस्तै कार्यमा संलग्न कलाकारलाई समातेको छ । मुम्बईको उपनगर गोरेगाउँमा पाँच तारे होटेलमा कोठीको व्यापार भइरहेको पर्दाफास गरेको छ । यस घटनामा प्रहरीले एक बलिउड अभिनेत्री सहित तीन युवतीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले आरोपितको बिरूद्ध भारतीय संहिता (आईपीसी) को व्यापार (रोकथाम) कानून अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यस पछि, प्रहरीले छापा लियो । महिलालाई घटनास्थलबाट उद्धार गरियो । प्रहरीले पक्राउ गरेका तीन महिलामध्ये एक जना बलिउड चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनीमाथि बलिउड र टिभी शोहरुमा काम गर्ने महिला कलाकारलाई ठूला होटेलहरुमा यस्तो व्यापारका लागि ल्याउने गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
एक बलिउड बेली डान्सर र दुई टिभी सीरियल कलाकारहरूले होटलमा आफ्नो व्यापारका लागि १६ लाख रूपैयाँ (नेरु) मा सम्झौता गरेको आरोप छ । प्रहरीले तुरुन्तै यस खरिद बिक्रिको पर्दाफास गरेर कारवाही शुरू गरेको छ ।
बलिउड चर्चित अभिनेत्री र डान्सरहरु पक्राउ परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ तर को हुन् भन्ने नाम खुलाएको छैन । मानवअधिकारको रक्षाका लागि उनीहरुको नाम गोप्य नै राखिने प्रहरीको दावी छ । Social News Source
Prev“लुकेर रातीराती ज्ञानेन्द्रकहाँ गएर रक्सी खाँदै गणतन्त्रबिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने मेरो बानी छैन”: केपी ओलि
ओहो केहुन्छ अब मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना सम्पुर्ण बिद्यार्थीले पढ्नै पर्ने !
चितवनमा होम आइसोलेसनमा बसेका एक सङ्क्रमित वृद्धको मृत्यु
आज फागुन ७ गते शुक्रबार , गणेश जिको दर्शन गरि हेर्नुहोस् तपाईंको राशिफल